Cabdifatax Sheekh Cabdulahi, oo Hadheeyey Saxaafada ku Hadla Af Somaliga – Rasaasa News
Aug 10, 2010 Cabdifatax Sheekh Cabdulahi, ethiopia, Ogaden, ONLF, oo Hadheeyey Saxaafada ku Hadla Af Somaliga
Madaxa Xisbiga talada u haya Ismaamulka Somalida, ayaa si weyn u hadheeyey maalmahan saxaada ku hadasha afka Somaliga. Cabdifatax ayaa ka mid ahaa waftiga Itobiya uga qayb galay wadahadalada nabada ee u dhaxeeya Itobiya iyo ururka ONLF.
Dhagayso BBC-Cabdifataax [mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/bbccabdifatax.mp3]
Kolkii ay dhamaadeen wadahadaladii u dhaxeeyey dawlada Itobiya iyo ONLF, ayaa Cabdifataax waxa codsaday Jaaliyadaha ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, si uu warbixin uga siiyo xaaladaha siyaasada iyo horumarka ee ka jira degaanka Somalida.
Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ayaa hore waxay shaki wayn uga qabeen [Itobiya] in ay wax xidhiidh ah la yeeshaan cid ka socota dhinaca dalka Itobiya. Waxaana jiray arimo keenay in ay sidaas wax u dhacaan. Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ee ku nool dalalka reer galbeedka ayaan iyagu dib ugu noqonin dhulkooda sidii ay u soo galeen dibadaha, waxaana ay saxaafadaha ka maqali-arki jireen warar aan wanaagsanayn.
Xukuumada Itobiya ayaa iyada laftigeedu colaadii ay kula jirtay Jabhadaha la dagaalama mid la mid ah kula dhaqantay dadweynaha Somalida Ogadeeniya guddo iyo dibadba, arintaas oo keentay shaki iyo cabsi iyo waliba in ay dadweynuhu gacan siiyaan ururada dawlada ka soo horjeeda.
Hadaba, dawlada Itobiya ayaa waxay aragtay in ayna shaqayninin siyaasadii ay hore ugu socotay, waxayna bilowday siyaasad dabacsan oo soo dhawayn ah oo ay kula dhaqmayso Jabhadaha dagaalka waday iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Arintaas waa sababta keentay in ay dawlada iyo ururadii la dagaalami jiray heshiisyo nabadeed dhex maraan, waloow ay qaarkood wali wadahadalo nabadeed u socdaan.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa aad u soo dhaweeyey siyaasada furfuran ee ay qaadatay dawlada Itobiya. Dadweynaha ayaa xiligan waxay wadaan dhaqdhaqaayo xoog leh oo ay ku taageerayaan nabada iyo waliba xiiso ay u qabaan in dalkooda iyo dadkooda ay si wanaagsan wax ugu qabtaan.
Waana arin looga baahan yahay dawlada Itobiya in ay dibadaha u dirto masuuliyiin sumcad wanaagsan ku dhex leh dadweynaha Somalida Ogadeeniya si ay u kasbaan kalsoonida dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Cabdifatax oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqaynayey muddo Ismaamulka Somalida ayaa noqday xubinkii ugu horeeyey ee ku guulaysta, in uu horfadhiisto qurbo joogta si wanaagsan wax uga dhaadhiciyo dadweynaha ka soo jeeda degaanka Somalida ee dagan dalka Maraykanka.
Waxaa hadana lagama maarmaan ah in masuuliyiin la mid ah Cabdifatax ay dibadah iyo dalalka dariska ahba u baxaan muujiyaana in qurba joogtu ay yihiin dadka dalka leh, wanaagiisana ay iyaga uuni ka shaqayn karaa.